HiPStore wuxuu ku dhuumanayaa dukaanka barnaamijka burcad-badeedka AppStore | Wararka IPhone
Maanta internetka ayaa gacmahiisa ku tuuraya madaxiisa si ay u aragto in Apple lafteeda lagu khiyaaneeyey HiPStore, taas oo ayaa ku siibtay dukaanka rasmiga ah ee AppStore dukaan bilaash ah oo lagu rakibo barnaamijyadooda burcad-badeedda.
Dabcan, laga bilaabo Actualidad iPhone waxaan si xoogan uga hortageynaa rakibaadda iyo adeegsiga codsigan, Shakhsiyan waan tijaabiyey si aan u arko ilaa heerka ay dhabta ahayd, iyo laga soo bilaabo markaan codsaday inaan aamino shahaada aan arkay wax igu filan, waan tirtiray shahaadada anigoon siin kalsooni waana tirtiray wax raad ah oo ka mid ah codsigan oo waqti dheer qaadan maayo in laga saaro AppStore-ka.
Isticmaalka shahaadooyinka waxay yeelan karaan cawaaqib xumo Waxay kuxirantahay isha aan ka rakibno iyaga, tusaale ahaan, waxaan siin karnaa helitaanka fog ee macluumaadka qaarkood ee ku saabsan qalabkeena ama xogta shaqsiyadeed, u oggolaanno maaraynta fog iyo xitaa ogaanshaha waxyaabaha sida barnaamijyada la rakibay, boqolleyda batroolka, wadaha, siyaasadda amniga iyo inbadan.
Waxaan rabaa inaan ka fekero in Apple ay ka hor istaagi doonto dukaamada kale inay sidaas oo kale sameeyaan isla markaana ay tani noqon doonto kiis go'doon ah, shaki kuma jiro waxay u horseedi kartaa kororka malware-ka iOS iyo sidoo kale kalsoonida iyo sumcadda wanaagsan ee AppStore iyo kooxdeeda dib u eegista ay hoos u dhacday (iyagu kumajiraan xiriir aad u wanaagsan).
Shaki la'aan waxa muhiimka ah ayaa ah in Apple, oo tirtirtay codsiyada xitaa dhigista xisaabiyaha xarunta ogeysiinta, ayaa seegtay codsi sidan ah In sharci ahaanta yar ee arrintu ay iska caddahay daqiiqadda 1aad.
Horumariyaha sidoo kale wuxuu leeyahay ceeb yar weydii boodhadhkaaga in la riixo si lagaaga caawiyo inaad sii wado bixinta barnaamijyada bilaashka ah (iyo habka loo diido mushaharka kuwa horumariya ee si adag uga shaqeeyay sidii ay u dhici lahaayeen).
Waxaan si taxaddar leh u dhegeysan doonnaa falcelinta Apple ee arrintan, waxaan rajeyneynaa inaad tallaabo ka qaadi doontid arrinta sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan isla markaana diiradda saareyso hal jeer ka hortag faafinta barnaamijyadan noocan ah AppStore-ka mana ahan kuwa kale sida LaunchCenter iyo shirkad.
Cusboonaysiinta: Apple aad ayuu u dhaqso badan yahay markan iyo barnaamijka hadda lama heli karo AppStore-ka, inkasta oo ay taasi ka tagi doonto raadkeeda iyo HiPStore waxay ku faantaa in laga helo xisaabteeda Twitter-ka oo ay jiraan dad badan oo adeegsadayaal ah oo soo degsaday barnaamijkan illaa hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » HiPStore wuxuu ku dhuumanayaa dukaanka barnaamijka burcad-badeedka Apple AppStore
Hadda lama heli karo
Sikastaba, barnaamijkani kumuu ogolaanin inaad rakibtid barnaamij kasta oo lacag la bixiyo, waa wax aan faa'iido lahayn
In kasta oo shaashadaha been-abuurka ah ee ay xidhaan, waxaan kuu xaqiijinayaa inay u oggolaadeen inay ku soo dejiyaan waxyaabo lacag la'aan ah, fiiri Twitter-ka waxaadna arki doontaa tirada markhaatiyaasha jira
Hagaag, dhowr jeer ayaan isku dayay umana oggoleyn. 3 maalmood ka hor waan awooday inaan aado bogga *********** markii la rakibayna waxaan soo dagsaday tomtom iberia, haa, ingiriisiga iyo dhowr barnaamij oo lacag lasiiyay sida midab kala baxa. Dhanka dib u eegista, waxaad dhahdaa Iphone ayaa kugu dalacaya barnaamijyada bilaashka u ah android. In markii aad iibsanayso taleefan, iyo in ka badan oo ay la socdaan sida ay qaali u yihiin, ay iyaguba adigu iska leeyihiin oo aad xaq u leedahay inaad kala soo baxdo wixii aad rabto. In yar oo ka mid ah xayaysiintu waa hagaag laakiin inaad liqdo wax ka badan macluumaadka aad raadineyso waa maskax-jab. Waxaan kugu dhiirigalinayaa inaad soo dejiso xanibaha iyo barnaamijyada aad rabto. Xayaysiiyayaasha iyo horumariyeyaashu waxay la mid yihiin tuubbada, darawalada ama shaqaalaha xafiiska mana aha inaan u dulqaadanno iyaga oo ku soo duulaya boosteejadayada. Waxaan sidoo kale xaq u leeyahay inaan wareerin oo aan awoodin inaan raadiyo bogaggeyga faragelin la'aan. Bye bye publi invasive !!!
Waxaan ku aqriyay dhowr jeer si aan u arko haddii faallooyinka ay ka yaraayeen xadgudubka laakiin ma ahayn, faallooyinkaaga waxay iila muuqdaan ixtiraam la'aan malaayiin dad ah oo u heellan tan, hal shay ayaa ah inay ka soo horjeedaan xayeysiinta dhabta ah ee faragelinta, xayeysiinta aan kuu oggolaaneynin inaad gasho waxyaabaha aad raadineyso, laakiin mid kale ayaa ah dhiirigelinta adeegsiga xannibaadaha iyo isbarbardhiga xayeysiistayaasha iyo horumariyeyaasha, aan ku jawaabo:
1. Waxaa jira barnaamijyo ku jira AppStore oo qiimo leh lacag iyo Google Play oo aan ahayn sababo kala duwan, oo ay ku jiraan xaqiiqda ah in Google Play la siiyay tirada qalabka Android ee jira, ma xaqiijin karaan iswaafajinta qof walba, iOS-ka haa, haddii Android-kaaga waxaad ka iibsataa barnaamij mana shaqeynayo, wuxuu ku jiraa dhadhan xun.
2. Horumariyayaashu waxay qabtaan shaqo adag oo ay ku kobciyaan barnaamijyada, adiguna waxaad cirka ugu qaylisaa in barnaamijku qiimihiisu yahay € 1 kadib markay shaqadu qabatay ay tahay wax laga xumaado, haddii aad iibsato phone 700 telefoon waa inaad awood u yeelatid inaad qarash gareyso € 1 Inbadan oo ah barnaamij wanaagsan, inaad ka iibsato taleefanka Apple xaq kuma siinayo inaad si sharci darro ah oo xorriyad leh ugu raaxaysato waxyaabaha ay dadka kale abuureen, dadka aan Apple ahayn oo aan helin hal € oo ka mid ah wixii aad ku bixisay taleefan, haddii aan raacno habkaas waxaan ku dambayn doonnaa AppStore ku dhowaad madhan iyo barnaamijyada yar ee ku hadhay xagga sare ee xayeysiinta.
3. Baqayaashu waa dharbaaxo wanaagsan oo ka dhan ah websaydhyada lagu soo gudbiyo xayeysiinta, waan ku raacsanahay, laakiin sida aad u rinjiyeynaysid, waa inaad tixgelisaa wax, websaydhkan, iPhone News, waxay ku kacaysaa lacag si loo ilaaliyo, sida kooxda ka dambeysa waa, blogkani ma aha mid bilaash ah ama raqiis ah, oo haddii qof kastaa adeegsado xannibaadayaal ama aanu nagu darin liistadooda, Actualidad iPhone iyo baloogyo kale oo badan labaduba waxay noqonayaan kharash, waana ka soo horjeedaa waxaad ka soo horjeeddo maxaa yeelay waxaad dhahdaa wuu sameeyaa kuu oggolaan maayo inaad ku raaxaysatid waxyaabaha aad raadineyso, ma jiri doono, laakiin nuxurkaas aad raadineyso ma jiri doono sidoo kale maaddaama bogagga internet-ka haddii aysan haysan waddo ay ku sii joogaan ay hoos mari doonaan, marka fadlan, maadaama aysan Wax lacag ah kama qaadano rukhsad ama wax sidaas oo kale ah markaad u timaaddo inaad la tashato shaqadeena, fadlan ha ixtiraamin annaga oo nagu xukumaya inaan dooneyno inaan bixinno nuxur bilaash ah oo ku saleysan xayeysiinta (aan-dhex-gal ahayn, haddii aad waligaa ka hesho xayeysiis fara-gal ah barta kaliya waa inaad Waa inaad la xiriirtaa kooxda adiga oo maraya qaybta "Xiriir" oo aad noo soo sheegto si aan u xallino).
Taasi waxay tidhi, fadlan wax ka beddel maskaxdaas diidaysa inay bixiso € 1 shaqada soo-saare oo oggolaatay inay ku bixiso € 700 qalab (oo qof walba uu u madax-bannaan yahay inuu sameeyo, laakiin kan hore ayaa aad uga caddaalad badan kan labaad), ka fikir yaa ku siiya waxyaabo bilaash ah maalin kasta oo ha u isticmaalin xannibaadaha boggeena, oo kuma soo dejisanno codsiyada si sharci darro ah, kana yar doodaha sida ixtiraam darrada ah u leh.
Waad ku mahadsan tihiin kuwiinii na taageera, waxaan sii wadeynaa inaanu maalin walba u fidino waxyaabahayaga oo aan wax qiimo ah kujirin adinkoo mahadsan!
Waan ka xumahay haddii aan ixtiraam lahaa, ujeedkaygu ma ahayn. Sidoo kale masiibo masiibo noqon kareysid oo ma dhihi kartid internetku wuu dhamaan lahaa, waa cudurdaar kaaga laakiin taasi macquul maahan hadda. Aniga, booqasho ayaan sameeyaa, waan cabbiraa, waxaan aadaa gurigeyga, waxaan dejiyaa miisaaniyad, waan daabacayaa waan qaataa oo hadii ay aqbali waayaan, saacado badan ayaa iga lumaya, umana yeerin deriska mid walba weydii € 1, iyagu ma xiiseeyaan dhibaatooyinkeyga ... Waxaan iibsadaa barnaamij waxaana ii soo baxday inaysan ahayn waxa ay iibineyso ama sameyneyso wixii ay ahayd inay sameyso, fiiri dib u eegista. Waxaan furaa bog, wuu madoobaadaa, biriq ayaa boodaya, qaar sida youtube ah ayaa ugu dambeeya 20 ilbidhiqsi mana saari kartid. Adigu waad akhrinaysaa qoraalkaasna waxaa loo dhaqaajiyay inuu "dhexgalo" xayeysiis kale ... Horumariyaha ama baloogga lacag laga qaado, wuxuu dhibsadaa kumanaan isticmaaleyaal ah oo, sida ay noo dhibto, loogu yeero faragelin. Marka la soo koobo, ma "ciqaabi kartid" kumanaan dad ah si ninku u haysto mushaharkiisa oo uu kuugu qasbo xanaaqaas qaab khasab ah. Hagaag, xorriyaddaas waxay ka kooban tahay awood u lahaanshaha go'aan qaadashada waxaanan go'aansaday inaanan lumin laba jeer waqtiga, laba jeer batteriga, laba jeer xawaaraha, laba jeer gigyada, oo lacag ku kacaya, aniga oo doorbidaya shirkadaha aan i xiiseyneynin haba yaraatee. Haddii aan doonayo in la muujiyo midnimo, waxaan xubin ka noqdaa urur samafal laakiin iyagu ima dhibayaan saacado badan oo aan socdo. Sikastaba waxaan kuu sheegayaa, haka noqon musiibo aad u weyn hana iska dhigto in aduunka oo dhami istaagayo si aad uhesho boggaaga, waxaan sii wadaa la talinta xayirayaasha. Qaarkood waxay leeyihiin liisas cad oo aad u oggolaan karto bogagga qaarkood, kuwa ixtiraam leh, waxay gelin karaan xayeysiis laakiin dib u soo noqoshadaan joogtada ah waa in la xakameeyo oo ay xaddidnaato maxaa yeelay waxaan arkaa in qaar badani kuu leexinayaan bogagga kale, waxay ku weydiinayaan taleefan , xogta iwm In mid walba wixii uu doono sameeyo laakiin uu xajiyo? Mid kastaa ushiisa fiican ha haysto. Dhamaan wanaag
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 9.2 iyada oo lagu hagaajinayo Safari View Controller
Khariidadaha Apple ayaa horeyba loo isticmaalay saddex jeer in ka badan khariidadaha Google ee iOS